Kunzwisisa Vashandisi ve iPhone | Martech Zone
Kunzwisisa Vashandisi ve iPhone
Muvhuro, October 10, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Iko hakuna kupokana kwekukanganisa uko iyo iPhone yakagadzirisa iyo smartphone indasitiri. Ini ndakatenga iPhone yemwanasikana wangu asi hombe screen uye isina musono Google kusangana kweThunderbolt (Android) yaingova yakawandisa kupfuudza saka ini handina kuenda iyo nzira. Mwanasikana wangu anonyatsomuda iye iPhone, zvakadaro, uye chaizvo haagone kuenda Chero kupi zvako pasina izvozvo. Iyo infographic kubva PaidViewpoint.com inopa imwe nzwisiso muvashandisi ve iPhone, mashandisiro avanoshandisa chishandiso, kuti chengetedzo yavo yakaita sei, uye nei vachizovandudza. Iyo juri ichiri kunze pa iPhone 4S uye kuti inosangana nezvinodiwa nevateveri veApple. ZVIMWE ZVAKAITIKA: Kutengesa kwakatopfuura mafoni miriyoni imwe saka ndinofungidzira kuti ndizvo!
Agreedo: Kuita Misangano Kubudirira
Dzidza Kutamba Nice